Muchidzidzo ichi, tichaona mazuva ehurukuro muChirungu. Mumusoro wedu wakanzi mazuva echirungu neTurkey, pachavewo nekurovedza muviri nezvemazuva echirungu uye nemitsara yekuenzanisira nezvemazuva echirungu Tichasanganisira kuperetera uye kududzwa kwemazuva muChirungu.
Izvo zvirimo zveedu echirungu mazuva kosi ane anotevera misoro, sezvaunodongorera pasi pasi pezasi peji, iwe uchaona inotevera misoro.
Kuperetera uye kududzwa kwemazuva eChirungu
Mazuva echirungu uye iwo akafanana neTurkey
Semuenzaniso mitsara pamusoro pemazuva muChirungu
Izuva ripi chirungu nhasi? Nhasi izuva ripi? usabvunze mibvunzo yako
Usaudze kuti nhasi chirungu chiripi
Mini bvunzo yezuva reChirungu
Exercises nezvemazuva echirungu
Rwiyo rwemazuva muchirungu
Zvino ngatitangei kukupa unoona wakanaka mazuva echirungu.
Zvakakosha Zvinyorwa Pamazuva eChirungu;
Mazuva echirungu nemwedzi zvinofanirwa kutanga nemavara makuru.
Haufanire kushandisa izwi rese kana uchitaura nezvemazuva nemwedzi. Iwe unogona zvakare kushandisa zvipfupiso pachinzvimbo, kunyanya mumagwaro akareba.
Izwi rekuti Mwedzi, iro ratiri kureva sezuva kuChirungu, rinoshandiswa seMwedzi. Izwi izwi mwedzi rinotora chinokwana -s seMwedzi. Zvinorevei zuva iri muChirungu Mubvunzo urikushamisikawo. Izwi rekuti Zuva rinotsanangurwa se "Zuva", uye Mazuva anotumidzwa zita -s muchimiro che "Mazuva". Muchitsauko chinotevera, tichaona zvikamu zvemazuva evhiki muChirungu.
* Chirungu mazhinji mazwi anowedzera -s, -es sezvipimo, zvinoenderana neshoko.
Ndeapi Mazuva Evhiki muChirungu?
Pane mazuva manomwe mukarenda revhiki. Kunyangwe zuva rega rega riine zvinyorwa zvaro uye kurira, vese vane chimwe chinhu chakafanana. Rinopera neshoko rekuti "Zuva", zvinoreva kuti Zuva rese. Ruzivo urwu runogona kuita kuti basa rako rireruke zvishoma uchizama kubata nemusoro mazita emazuva.
Mune rondedzero pazasi, iwe unowana iyo yeChirungu yemazuva acho, avo mapfupikiso mumabhureki uye avo akafanana Turkish. Iwe unokwanisa kubva waongorora tsananguro pfupi yezwi rimwe nerimwe remazwi aya, kwaakabva uye mashandisirwo awo mumutsara. Kune nzira dzakawanda dzaungashandisa kuisa mumusoro mazuva.
Imwe yeiyi ndiyo nzira yekushanda nekunyora izwi rimwe nerimwe kashanu. Imwe nzira inoshanda ndeyekugadzirira mapepa madiki neChirungu kune rimwe divi remakadhi neTurkey kune rimwe uye kushanda nenzira yekusarudzika nekuverenga. Panguva imwecheteyo, unogona kunyora mazwi echirungu mune zvimwe zvikamu zvemuimba yako uye kugadzirira nekunamatira mapepa madiki anozove pamberi pemaziso ako nguva dzese.
Muvhuro (Mon): Muvhuro
Chipiri (Tue): Chipiri
Chitatu (Wed): Chitatu
China (Thu): China
Chishanu (Fri): Chishanu
Mugovera (Sat): Mugovera
Svondo (Zuva): Svondo
Muvhuro Zuva Ripi?
Muvhuro izuva rekutanga revhiki. Muchimiro cheMuvhuro, tsamba yekutanga yakanyorwa nemusoro. Kunyangwe kana ikashandiswa muchirevo, tsamba yekutanga inogara yakanyorwa. Mutsananguro wayo unoratidzwa saMon. Nzira yekureva sei izwi Muvhuro Mhinduro kumubvunzo ndeyekuti inoverengwa sa "mandey".
Pane maonero akasiyana nezve kwakatangira zuva rega rega revhiki muChirungu. Kunyanya neMuvhuro, Mugovera neSvondo, mazita avo anofungidzirwa kuti anobva kumatenga ekudenga. Mwedzi, uyo unofungidzirwa kuti wakabva pamazwi anoti Saturn, Mwedzi uye Zuva, ndipo panobva izwi rekuti Muvhuro muchiTurkey.
Semuenzaniso Mitsara Nezve Muvhuro - Muvhuro
Iwe unofanirwa kuendesa kumabasa ako neMuvhuro.
Unozotambidza homuweki yako neMuvhuro.
Basa rechikoro rinofanira kuitwa Muvhuro unotevera.
Basa rekumba rinozoendeswa Muvhuro unotevera.
Chipiri Zuva Ripi?
Chipiri izuva rechipiri pavhiki. Tsamba yekutanga muchimiro cheChipiri yakanyorwa muhombe. Kunyangwe kana ikashandiswa muchirevo, tsamba yekutanga inogara yakanyorwa. Chidimbu chayo chinoratidzwa seTue. Chipiri Mataurirwo eshoko Mhinduro kumubvunzo ndeyekuverenga se "tyuzdey".
Kwakatangira izwi reChipiri kunofungidzirwa kuti kunobva kuna Tyr, wengano ChiNorse Mwari.
Chipiri - Sample mitsara nezve Chipiri
Nhasi izuva ripi? - Nhasi iChina.
Nhasi izuva ripi? - Nhasi Chipiri.
Mazuva evhiki ndeaya: Muvhuro, Chipiri, Chitatu, China, uye Chishanu.
Mazuva evhiki: Muvhuro, Chipiri, Chitatu, China neChishanu.
Iyo Turkish Grand National Assembly ichasangana neChipiri.
Grand National Assembly yeTurkey ichasangana neChipiri.
Chitatu Zuva Ripi?
Chitatu, Chitatu izuva rechitatu revhiki. Muchimiro cheChitatu, tsamba yekutanga yakanyorwa nemusoro. Kunyangwe kana ikashandiswa muchirevo, tsamba yekutanga inogara yakanyorwa. Chidimbu chayo chinoratidzwa se Wed. Chitatu Mataurirwo eshoko Mhinduro kumubvunzo ndeyekuverenga se "vensdey".
Chitatu chakatanga seZuva raWöden. Wöden, kana Odin, anozivikanwa semutongi wehumambo hwevamwari veNorse. Iri izwi, rakatorwa mungano, rakashanduka nekufamba kwenguva kuti rive Chitatu.
Chitatu - Sampuli mitsara nezve Chitatu
Ivo havana makirasi neChitatu masikati.
Iko hakuna makirasi neChitatu masikati.
Muedzo weChitatu unenge wakaoma.
Kuongorora kweChitatu kuchanetsa.
Tinofanira kuendesa rondedzero neChitatu.
Tinofanira kuendesa chinyorwa neChitatu.
China Zuva Ripi?
China, China izuva rechina revhiki. Tsamba yekutanga muchimiro chemusi wechina yakanyorwa muhombe. Kunyangwe kana ikashandiswa muchirevo, tsamba yekutanga inogara yakanyorwa. Pfupiso yacho inotsanangurwa saTu. China Mataurirwo eshoko Mhinduro kumubvunzo ndeyekuverenga se "törzdey".
Kwakatangira izwi reChina kunobva kuna Thor, mwari wesimba nekudzivirira, uyo ane nzvimbo mungano dzeNorse. Zuva rinozivikanwa seZuva raThor rakatanga kuimbwa seChina nekufamba kwenguva.
China - Sample mitsara nezveChina
Amai vangu vanga vachirwara kubva musi weChina wadarika.
Chishanu Zuva Ripi?
Chishanu izuva rechishanu revhiki. Muchimiro cheChishanu, tsamba yekutanga inonyorwa muhombe. Kunyangwe kana ikashandiswa muchirevo, tsamba yekutanga inogara yakanyorwa. Mutsananguro wayo unoratidzwa saFri. Chishanu Mataurirwo eshoko Mhinduro kumubvunzo ndeyekuverenga se "firaydey".
Chishanu chinouya kubva kuna mwarikadzi Frigg, kana Freya, aive mudzimai waOdin mungano dzeNorse. Izwi, rinotaurwa seZuva raFreya, rakashanduka kuita Chishanu nekufamba kwenguva.
Chishanu - Sample mitsara nezveChishanu
Ndichange ndiri kunoona chiremba zvakare Chishanu chinotevera.
Ndichasangana nachiremba zvakare Chishanu chinotevera.
Bhavhadhe rangu rinowira musi weChishanu gore rino.
Gore rino zuva rangu rekuzvarwa riri Chishanu.
Mugovera Zuva Ripi?
Mugovera izuva rechitanhatu revhiki. Ndiyo vhiki yevhiki. Tsamba yekutanga muchimiro cheMugovera yakanyorwa nemavara makuru. Kunyangwe kana ikashandiswa muchirevo, tsamba yekutanga inogara yakanyorwa. Chidimbu chayo chinoratidzwa seTengesa. Mugovera Mataurirwo eshoko Mhinduro kumubvunzo ndeyekuverenga se "pamutsetse".
Mugovera unowana zita rawo kubva pakatangira izwi mapuraneti. Iyo inofungidzirwa kuti inotanga seZuva raSaturn. Yakashanduka nekufamba kwenguva ikava Mugovera.
Semuenzaniso mitsara nezve Mugovera - Mugovera
Zvakadini neMugovera unotevera?
Nhasi iMugovera mangwana mangwana Svondo.
Svondo Zuva Ripi?
Svondo izuva rechinomwe, zuva rekupedzisira revhiki. Ndiyo vhiki yevhiki. Muchimiro cheSvondo, tsamba yekutanga yakanyorwa nemusoro. Kunyangwe kana ikashandiswa muchirevo, tsamba yekutanga inogara yakanyorwa. Chidimbu chayo chinonzi seSuva. Svondo Mataurirwo eshoko Mhinduro kumubvunzo ndeyekuti inoverengwa sa "sandey".
Svondo inowana zita rayo kubva kwakatangira izwi rekuti zuva. Zuva reZuva rinoreva Zuva reZuva. Nekufamba kwenguva, zvakareruka ndokuva Svondo.
Svondo - Sample mitsara nezve Svondo
Tichaenda kupikiniki Svondo inotevera.
Tiri kuenda kupikiniki Svondo inouya.
Tiri kuzoroora Svondo inouya.
Tichachata Svondo inouya.
Mazuva echiChirungu Dzidzira Mibvunzo
1.Kana zuro uri Chitatu, nhasi izuva ripi?
a) Svondo b) Chipiri c) Muvhuro d) China
2.Kana zuro waive Svondo, mangwana izuva ripi?
a) Muvhuro b) Chipiri c) China d) Mugovera
3.Kana nhasi chiri Chishanu, raive zuva ripi nezuro?
a) China b) Chitatu c) Chipiri d) Mugovera
4.Kana mangwana chiri Chitatu, kwanga kuri zuva ripi nhasi?
a) Svondo b) China c) Muvhuro d) Chipiri
5.… .. izuva rinotevera Svondo uye rinowanzoreva kutanga kwevhiki rebasa.
a) Chipiri b) Mugovera c) Muvhuro d) Mugovera
Mimwe mimwe mibvunzo yemuenzaniso:
Chii chiri zuva rechitatu revhiki?
Ndeapi mazuva evhiki?
Muvhuro, Chipiri, Chitatu, China, Chishanu.
Muvhuro Chipiri Chitatu China China Chishanu.
Nderipi zuva rekutanga kuenda kuchikoro?
Chii chiri zuva rekutanga rechikoro?
Chii chinonzi zororo?
Mangani mazuva aripo mugore?
Muenzaniso Sentensi Yemazuva muChirungu
Nhasi izuva rekutanga revhiki: Nhasi izuva rekutanga revhiki.
Muvhuro izuva rekutanga revhiki. : Muvhuro izuva rekutanga revhiki.
Chipiri izuva rechipiri pavhiki. : Chipiri izuva rechipiri pavhiki.
Amai vangu vachauya neChishanu. : Amai vangu vachauya neChishanu.
Ndichadzoka kuchikoro Muvhuro unotevera nekuti im still a sick: Ndichadzokera kuchikoro Muvhuro unotevera nekuti ndichiri kurwara.
Ini ndichatenga bhegi idzva neChishanu: NeChishanu, ini ndichatenga bhegi idzva.
Kune mazuva manomwe muvhiki: Kune mazuva manomwe muvhiki.
Kune mavhiki makumi mashanu nemaviri pagore: Pane mavhiki makumi mashanu nemaviri pagore.
Svondo inonzi zita rezuva: Svondo inotumidzwa zita reZuva.
Ndeupi zuva revhiki raunofarira? : Ndeupi zuva revhiki raunonyanya kufarira?
-Vanogona kunge vasipo neMuvhuro.
Hazviite kuti vange varipo neMuvhuro.
-Saka, ndiudze zvimwe pamusoro pezvakaitika pa cinema Muvhuro wadarika.
Ndiudze zvizere kuti chii chakaitika kuimba yemitambo Muvhuro wadarika.
-Ungade kuenda neni musi neMuvhuro?
Ungade kuenda neni musi neMuvhuro?
-Iwe unoziva chero zororo, rakapemberera neMuvhuro?
Iwe unoziva nezve chero mazororo / mazororo anopembererwa Muvhuro?
-Chikoro chakavharwa Muvhuro wadarika, nekuti yaive zororo.
Chikoro chakavharwa Muvhuro wadarika sezvo yaive zororo / zororo.
Zvino zvawava kuziva mazuva evhiki, iwe uchada mazwi akakodzera kuti ugone kuaisa mumutsara. Iwe unogona nyore kushandisa aya matauriro zvichienderana nechimiro chemutsara. Kugadzira mitsara muChirungu kuri nyore kana uchinge waziva mazwi ekutanga. Kuti ubate nemusoro mapatani aya, zvakare, Nzira dzekudzidza dzeChirungu Unogona kuishandisa uye kuisimbisa kazhinji nekuishandisa muhupenyu hwako hwezuva nezuva.
Heano mamwe mazwi uye zvirevo zvaunogona kushandisa nemazuva evhiki muChirungu;
Nhasi - Nhasi
Mangwana - Mangwana
Nezuro - Nezuro
Mangwanani - Mangwanani
Masikati - Masikati (12: 00-17: 00)
Manheru - Manheru (Pakati pa17: 00 na21: 00)
Husiku - Husiku
Zuva rekubva - Svondo (Rinogona kushandiswa panzvimbo pevhiki.)
Kune mazuva manomwe muvhiki.
Mazano eIyo Misoro muChirungu Mazuva
Kunyanya nziyo nenyaya pfupi zvinogona kushandiswa pakutsanangura musoro wemazuva muChirungu. Aya marudzi enziyo, ayo akakodzera kwazvo vadzidzi vepuraimari vadzidzi, anogara zvachose kana achiteererwa nokungwarira uye kakawanda. Vana vanoedza kuperekedza nziyo vanogona kudzidza zvirinyore nezve kuverenga uye zvakaenzana zvemazuva.
Semumunda wese, zvakakosha kwazvo kudzidzira muchirungu kudzidza. Nekudzidzira mazuva echirungu kwemazuva mashoma, uchishandisa iwo mumitsara, kuteerera nziyo nezvemazuva echirungu, kana kuverenga mamwe mabhuku, unowana tsika yakakwana mune izvi. Kunyanya muhupenyu hwako hwezuva nezuva, iwe unosimbisa zvakakwana nekushandisa iwo musoro wemazuva echirungu mumitsara yako kazhinji.
Mharidzo mazwi nezve mazuva evhiki muChirungu:
Ndiudze, ndeapi mazuva evhiki?
Iwe une yako Muvhuro, Chipiri, Chitatu, China, Chishanu, Mugovera, Svondo, futi
Zvino, dzokorora shure kwehuku yehuku, pano toenda
Mutsara unoshandiswa kubvunza kuti izuva ripi izuva reChirungu;
Ruzivo rwakakosha *
Ndinogara ndichifamba ndichienda musi weSvondo. (Ndinogara ndichifamba-famba musi weSvondo.)
Sezvinoonekwa mumutsara, izwi rekuti Svondo rakatora iyo -s suffix. Mazuva anogara achishandiswa mumutsara pasina zvirevo. Asi chete kana iwe uchizotaura chimwe chakakosha chezuva iro, iwe unofanirwa kuunza peya yezvishongo. Semuenzaniso, mumutsara uri pamusoro, izwi Svondo rinotora chinokwana -s nekuti anongofamba neSvondo.
Kana zvichiratidza mazuva, zvirevanguva zvegumi kana mukati zvinoshandiswa pakutanga. Izvo zvakare dzimwe nguva zvinovhiringidzika kuti ndezvipi zvirevo zvekushandisa kana uchijekesa mazuva evhiki. Kushandisa zvirevo zvenguva zvinogona kusiyana zvichienderana nemashandisiro aunoita zuva revhiki mumutsara uye zvinoreva chirevo. Chirevamwene "mu" chinoshandiswa pakutaura nezve pfungwa yesvondo zvaro, uye "pa" apo rimwe zuva revhiki rinonyanya kutaurwa.
Muvhuro, neSvondo, neChipiri.
Mazuva eVhiki akarongwa Sei?
Mazuva manomwe pavhiki akapatsanurwa kuita zvikamu zviviri. Kune mazuva maviri muChirungu semazuva evhiki uye kupera kwevhiki. Kureva mazuva evhiki muChirungu "Vhiki Mazuva”Kutsanangura kunoshandiswa.
Mazuva evhiki- Vhiki Mazuva
Kupera kwevhiki - Kupera kwevhiki
Amai vangu vanobheka chingwa nemakeke pakupera kwevhiki.
Amai vangu vanobheka chingwa uye makuki pakupera kwevhiki.
Sato anoita archery pakupera kwevhiki.
VaSato vanoita basa rekupfura nemiseve pakupera kwesvondo.
Ndezvipi zvinhu zvaunoita iwe pakupera kwevhiki?
Semuenzaniso Chinyorwa cheLecture muChirungu Mazuva
Mazuva echirungu kudzidzisa inogona kuve yakaoma nyaya, kunyanya kune vadzidzi vepuraimari vadzidzi. Kutsanangura izvi, kushandisa chinyorwa mune imwe pateni kuongorora chinyorwa ichi gare gare inova nzira yekusingaperi yekudzidza. Kune izvi, mudzidzisi anotanga averengera iro kirasi uye obva adzidzisa izwi rimwe nerimwe muchinyorwa rimwe nerimwe.
Kune mazuva manomwe muvhiki. Mazuva ano ndeaya: Muvhuro, Chipiri, Chitatu, China, Chishanu, Mugovera neSvondo. Mazuva evhiki: Muvhuro, Chipiri, Chitatu, China, Chishanu. Mazuva evhiki: Mugovera neSvondo. Pane mazuva mazana matatu nemakumi matatu nemashanu pagore. Pane mazuva makumi maviri nemasere, makumi matatu kana makumi matatu nerimwe mumwedzi.
Kuziva mazuva evhiki zvakadzama kunotibatsira munzira dzakawanda. Isu tinogara tichishandisa mazuva munzvimbo dzese dzehupenyu hwezuva nezuva senge khalenda, kugadzwa, musangano webhizinesi. Zvakakosha kushandisa mazuva mumitsara. Mune bvunzo iwe yaunotora kana mune mamwe akawanda mamiriro, ungangotarisana nenyaya yemazuva. Naizvozvo Mazuva evhiki muchirungu Iwe unofanirwa kudzidza chidzidzo ichi zvakanyatsonaka.
Sezvo Chirungu iri mutauro usingagone kuverenga sekunyorwa kwazvinoitwa, unofanirwa kunyatsoteerera kududzwa kwemazwi iwe paunotanga kudzidza. Iwe unofanirwa kuyedza izvi kakati wandei nekudzokorora iro izwi zvinonzwika nekukurumidza mushure mekuteerera kuduramazwi. Kudzokorora mazwi auchangobva kudzidza kudzamara manzwi abuda zvakakwana uye zvakajeka zvinopa kudzidza zvachose. Kudzidza chiperengo chezwi chete hakuna kukwana muChirungu. Iwe unofanirwa zvakare kudzidza madudziro aro uye urishandise kazhinji mukutaurirana. Unogona kukurumidza kuchengetedza mazwi matsva mundangariro dzako, kunyanya nekuteerera nziyo dzeChirungu.
Izvo zvinofanirwawo kucherechedzwa kuti kana uchishandisa echirungu nguva zvikamu, mazuva, mwedzi, uye dzimwe nguva kunyangwe mwaka zvinoshandiswa pamwechete. Pakati pese, mumwe mutemo wekuraira unoshandiswa pakushandisa kwavo. Izvo zvakanyorwa muchimiro chezuva rekutanga uyezve mwedzi muchirevo. Mwedzi nemazuva mapatani akabatanidzwa kune mumwe nemumwe nenzira yekufungidzira kwenguva zvakare zvakare chidzidzo cheChirungu chinowanzoonekwa muhupenyu hwezuva nezuva.
Kuzviratidza zvekare kumazwi akadzidza anogara achikupa mienzaniso mitsva uye nekudaro inosimbisa mazwi aya mundangariro dzako. Kune rimwe divi, kudzidza mazwi matsva nematauriro kwakakosha pakuvaka izwi rako, kunyanya mumutauro une mazwi akawanda seChirungu. Musoro wemazuva echirungu inyaya yaunogona kudzidzira zviri nyore uye nekuishandisa nguva dzose. Kana iwe ukangoerekana watanga kudzidza Chirungu mune tarisiro yekuita zvemashiripiti kudzidza zvese uye chidzidzo chega chega, iwe ungangodaro uchivhiringidzika uye kutonhorera kubva kune iri basa rekudzidza kwenguva refu.
Une shamwari kana vaunoziva vanoisa online muChirungu? Usapotsa ivo mune yako nhau feed. Skena zvinhu zvavanogovana uye usakanganwa kuwana mumwe kana vaviri vanhu mazuva ese. Vanogona kunge vari nhau kana zvinyorwa zvemagazini, mavhidhiyo, hurukuro, zvinyorwa zveblog, nziyo, kana chero chimwe chinhu: kana chiri muchiRungu uye musoro wenyaya unofarira iwe, zvinobatsira. Usakanganwa kuenderera nhanho nhanho, kushamisika uye kutsvagisa.
Mazuva echirungu hurukuro yekupedzisira magumo
Sezvimwe nechimwe chidzidzo paunenge uchidzidza mutauro mutsva, kudzokorora uye kududza kwakakodzera ndizvo zvakakosha pakubatsira mazwi matsva kugara mundangariro dzako. Neichi chikonzero, pazasi iwe unogovana iwe Dzidzira mibvunzo nezve mazuva echirungu ve Mazuva echirungu sampuro zvirevo Unogona kuverenga chikamu. Iwe unogona kupindura mitsara pano nekuinyora pasi pabepa.
Paunofunga kudzidza Chirungu, imwe yenyaya dzakakosha nyaya dzaunofanira kudzidza mazuva echirungu. Kudzidza chikamu ichi kunyatso zvinoreva kudzidza mazwi aunoshandisa kazhinji muhupenyu hwako hwezuva nezuva. Muchikamu chino Nzira yekunyora mazuva muChirungu, mataurirwo emazuva muChirungu Takatarisana nenyaya dzakadai.
Kudzidza mazuva evhiki muChirungu kwakakosha kune wese mudzidzi mutauro. Kuziva matauriro emazuva evhiki, kubva pakubhuka musangano kuenda kunotora kuhotera, chikamu chakakosha chehurukuro yezuva nezuva. Neraki, kudzidza mazuva evhiki muChirungu kuri nyore uye tine mazano ekuti ungakubatsira sei kuvarangarira.
Iwe unowanzo shandisa mazuva nemwedzi paunenge uchiita musangano kana kuronga musangano, kunyanya kana iwe uchida kuve nyanzvi mune bhizinesi Chirungu. Naizvozvo, iwe unofanirwa kudzidza chidzidzo ichi zvizere uye edza kutaura uchitsetsenura. Iwe unogona zvakare kushandisa nzira yekuisa Chirungu muhupenyu hwako hwezuva nezuva, inova imwe yenzira dzakakosha kwazvo dzekudzidza Chirungu.
# Ndeapi Mazuva Evhiki muChirungu?
# Mazuva echirungu
# Muvhuro Zuva Ripi?
# Semuenzaniso Mitsara Nezve Muvhuro - Muvhuro
# Chipiri Zuva Ripi?
# Chipiri - Sample mitsara nezve Chipiri
# Chitatu Zuva Ripi?
# Chitatu - Sampuli mitsara nezve Chitatu
# China Zuva Ripi?
# China - Sample mitsara nezveChina
# Chishanu Zuva Ripi?
# Chishanu - Sample mitsara nezveChishanu
# Mugovera Zuva Ripi?
# Semuenzaniso mitsara nezve Mugovera - Mugovera
# Svondo Zuva Ripi?
# Svondo - Sample mitsara nezve Svondo
# Mazuva echiChirungu Dzidzira Mibvunzo
# Muenzaniso Sentensi Yemazuva muChirungu
# Mazano eIyo Misoro muChirungu Mazuva
# Rwiyo rwemazuva muchirungu
# Mutsara unoshandiswa kubvunza kuti izuva ripi izuva reChirungu;
# Mazuva eVhiki akarongwa Sei?
# Semuenzaniso Chinyorwa cheLecture muChirungu Mazuva
# Mazuva echirungu hurukuro yekupedzisira magumo
Kwete: Isu tinogara tichiedza kukupa ruzivo rwezvino. Ichi chinyorwa chauri kuverenga chakatanga kunyorwa dzinenge mwedzi mitatu yapfuura, Nyamavhuvhu 3, 27, uye chinyorwa ichi chakapedzisirwa kuvandudzwa muna Gumiguru 2021, 10.